Iyo 25 Yakanyanya Vhidhiyo Mitambo yeGNU / LINUX uye Steam Machine | Linux Vakapindwa muropa
Izvo zvinotonzwika kunge zvichidzokorora, asi nyika ye vhidhiyo mutambo paLinux iri kuva nezera regoridhe nemazita matsva uye kufarira kwemamwe makambani nevasimudziri mukutakura kana kunyange kuburitsa mazita chete kune chikuva chepenguin. Gore rakapera isu tatoita chinzvimbo chakafanana, uye chegore rino tichagadzira zvakare runyorwa neakanakisa 25 aripo emavhidhiyo mazita emitambo yeGNU / Linux uye yeSteamOS kana Valve's Steam Machine.
Sezvaunoziva, unogona kutenga kana kurodha mumitambo yemavhidhiyo munzvimbo dzakasiyana siyana kana muzvitoro, asi inonyanya kuzivikanwa uye iyo ine kufamba kwakanyanya ndeye chiutsi. Ndokusaka ini ndichikukurudzira kuti udzokere kwairi uye uone iyo yese mitambo iriko yeLinux yako, zvirokwazvo iwe unozonakidzwa kwemaawa mazhinji navo. Zvakanaka, chero nzira yekuwana mazita, kana kunyangwe iwe ukasarudza emahara uye akavhurwa sosi sosi, chakakosha ndechekuti unakirwe. Neichi chikonzero, isu tinokubatsira iwe nechichi chinyorwa kuita sarudzo yezvakanakisa zviripo panguva ino.
Nekudaro, senguva dzose, inyaya yekuravira. Mazita ezvinzvimbo ndiwo akasiyana zvakanyanya, uye zvikamu zvavari futi. Naizvozvo, zvinonetsa kuita sarudzo inobvumiranwa nemunhu wese. Asi yedu sarudzo ye pamusoro 25 mitambo es:
Hitman: mumiriri wemhondi ane mukurumbira anouya kuLinux kuzogara nekufadza vateveri veiyi saga. Pasina kupokana, rimwe remazita anotarisirwa kwazvo ...
Kubudirira 6: kubva kune wekupfura tinoenda kuchirongwa nemutambo wakakurumbira wevhidhiyo maunogona kubata hupenyu hwako uye kurwa nevavengi.
XCOM 2: Imwe yemakuru, mutambo wechiito wakaiswa mune inofungidzirwa kuramba kwemauto iyo inokunyudza mune zvinonakidza kurwisa.
Mad Max: iyo bhaisikopo rine mukurumbira rasiya mutambo wevhidhiyo pakukwirira kwaro, kune avo vanoda kuita uye kutyaira mune ino ramangwana nyika.
Kufa Chiedza: Iyo Inotevera Enhanced Edition: Takataura pamusoro pemazhinji emazita aya mune zvimwe zvinyorwa, ndozvazviri. Kana iwe uchida zombies uye uchitumira apocalyptic worlds, iwe uchaifarira.
SOMA: yakafanana neinozivikanwa uye akabudirira Bioshock aunogona kuwana kune mamwe mapuratifomu. Inonakidza, hapana mubvunzo.
Portal 2: imwe yemakuru, pasina kupokana. Inowanikwa yeLinux, kubva kuruoko rweValve kunouya zita iri.
Nyika 2: yechipiri vhezheni yeWasteland inotivigira sainzi fungidziro yezviitiko uye mamishini ane akakwira mhando mifananidzo yekufadza ziso uchititandadza.
Mbiru Asingagumi: imwe yemaitiro akanaka, nguva yemahofori uye mashiripiti maunofanira kurarama nekugadzirisa yako nenzira yakanaka.
Deus Ex: Vanhu vanoparadzanisa: Icho chimwe chezveramangwana sainzi ngano mazita auchanyatsoda.
Pakati-pasi Mumvuri waMordor: Unoda Ishe weRings, nyaya dzemashiripiti, maorcs uye vamwe vanyori vekunyepedzera, woedza mutambo uyu zvichibva panguva yepakati.
Nyeredzi Hondo: Knights dzeiyo Old Republic 2: Kana iwe uri fan yeStar Wars, uchafarira zita iri, iri RPG yakauya kusisitimu yedu kuti tifare.
Metro: Chiedza chekupedzisira Redux- Mumwe wekutanga munhu kupfura mune yekupedzisira apocalyptic nguva yakaiswa muRussia kwaunofanirwa kurarama.
ChaNoah: Survival vakashandukaKupona mitambo yemavhidhiyo iri mufashoni izvozvi, sezvo ichi chiri chimwe chazvo. Nguva ine hukasha uye yeJurassic umo maunofanira kurwira kuenda kumberi.
Borderlands: Iyo Pre-Sequel uye Borderlands 2: ndeimwewo zita muBorderlands saga ine yakawanda yekuita nevatorwa ...
Europa Universalis IV- Imwe nzira yemavhidhiyo mutambo ine nhoroondo uye tsika dzakaiswa muEurope.
Cities: Skylines: Kana iwe uchida kuvaka nekutarisira maguta makuru, unogona kusunungura fungidziro yako neiyi.
Crusader Madzimambo II: yakaiswazve medieval Europe, mutambo wekudzokera kumakonzo madhijitari.
Transistor: yakanaka nyaya, yakanaka kumashure mimhanzi uye mamwe akachenesa mifananidzo yemafaro.
Rocket League- Musanganiswa usingawanzo nhabvu uye mota dzinozoita kuti iwe upedze maawa wakanamatira kuchiratidziri. Chinhu chakasiyana asi chinodhakwa.
The Talos Principle- Mutambo wakavanzika nemapuzzle akanaka uye anonakidza kugadzirisa zvirahwe zvinomuka.
Kerbal Space Program: kuvaka uye kubhururuka nzvimbo dzepasi, ndizvo zvaunofanira kuita. Kana iwe uchida kutanga yako yega nzvimbo chirongwa, enda kumberi ...
Foshoro Knight- Kune avo nostalgic yemapikisheni, inouya iyi RPG iyo inodzosera yakatarisa kutarisa kune ino chiito mutambo.
Superhot: Icho chimwe chinonakidza kupfura, kunyange chiri chakazvimiririra maererano nekugadzirwa kwemifananidzo yaro, nekuti iwe uchaona zvese sekunge une infrared chiratidzo ...
Zvisingaoneki Inc.: ndechimwewo chinyorwa mune zano rako kuenda risingazivikanwe, nemisanganiswa yekuba, kurwa, uye chiitiko chakavimbiswa.
Kana iwe uchida mamwe mazita kana uine chero mazano, usazeze tisiirei makomenti enyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Wepamusoro 25 Yemitambo Yemavhidhiyo yeGNU / LINUX uye Steam Machine
Sergio Ramirez akadaro
Yakazara hondo: Warhammer? Ini ndinofunga uyu mutambo wakakodzera nzvimbo pane urwu runyorwa.
Pindura Sergio Ramírez
Chaizvoizvo, ndiri kushaya TW Warhammer uye zvakare TW Attila uye Nhabvu Manager 2017.
Gustavo Adolf akadaro
Zvinotaridza kwandiri kuti Tomb Raider yakakodzera izvi pakati penzvimbo dzekutanga
Pindura Gustavo Adolfo
Marcos Yepez akadaro
Dioooooossss Mbiru ndeye RPG, chakashata chinyorwa.
Pindura Marcos Yépez
Ini ndinoda Insurgency, haina mukurumbira. Iyo tactical shooter, chaizvo haugone kuenda rambo senge muCD kana vamwe. Ini ndakashamisika kuti yaive neshanduro ye linux.
Ini ndangoridza mwenje unofa uye inoda kanenge kaviri muchina kuiridza pane linux ...
uye League Of Legend vachazvisanganisa riinhi ???
Pane zvakatumirwa pamusangano foramu yekugadzira iyo Linux vhezheni yeLOL uye ivo vagadziri vanopfuura zvachose
Ini ndakusuwa 0 AD mutambo mukuru une yakanakisa mifananidzo.
Iwe unoti unofarira zvemakomputa uye F1 uye hauise F1 2015 kana 2017 ... zvakanaka, uchiona zuva rechinyorwa, pamwe yanga isati yatengeswa. Asi ini ndinoiridza pa4K yakazara skrini ine ese mafirita, kunze kweAnti-Aliasing uye inoenda sepfuti pa70fps paavhareji. (Amdgpu mutyairi ane gigabyte RX Vega64)
Zvakare iyo Tomb Raider uye iyo Rise yeTomb Raider yakanaka kwazvo.
Iyo Human Fall Flat, Mbudzi simulator, Iyo muroyi 2, inova imwe yeakanakisa kunyangwe yeChirungu ... Ye online kupfura muLinux isu tine VERDUN, unova mutambo mukuru.
Ini handikanganwe iyo TRINE saga, inoshamisa uye nevaSpanish vanogadzira mugariki: D.
Iyo Talos Nheyo, yekutanga kubuda muVULKAN, kwete Doom, iyo yakabuda pamahwindo ...
Uyezve mimwe mitambo mikuru seSurgeon simulator, American truck simulator, Paint the Town in red, inova hutsinye uye iwe unoseka, Octodad Dadliest kubata, mumwe mutambo joke ... Iyo Shroud ye avatar-Fprsaken Virtues, inova Hilarious multiplatform ROL mutambo usati wapera uye uchiri kuvandudzwa, asi nezvazvinotora, isu tinogona kutonakidzwa nemutambo wakanaka weiyo sitaira pa4K kunyangwe nezviitiko zvakanaka.
Handisi kufarira mitambo yekupfura, asi Spec OPS Mutsetse uyu mutambo wakanaka kutarisa uye unogona kunakidzwa nhaurirano dzakanaka :)
Ikozve kune yeropa Shadow Warrior… chikara nekatanas yake gutting… .iyi…. kucheka madhimoni "bvudzi" :-)
Uye mamwe mazita makuru akadai seSavage Lands… Serious SAM 3 BFE uye iyo fusion Beta 2017, iyo yaunogona kunakidzwa nayo yakawanda Serious Sam, Kuruboshwe Kune Vakafa uye Hafu Hupenyu mazita, anotamba-anotamba maTitulazos anoshanda pane chero chero komputa.
Uye zvadaro watove seGTA…. iyo Saera mutsara saga, hutsinye !!! Isu zvakare tine ingangoita mitambo yese yemuno inowanikwa muGNU / Linux, ndiyo tsvimbo. Uye zvakanaka, ivo havasi GTA, asi zvinoita senge uye kunyange dzimwe nguva nehunhu hwakanaka.
Uye heano mamwe akanaka… Amnesia, Outlast, Road Redemption (wandinofarira mugwagwa Rash mukomana kubvira kickstarter yatanga), Overlord Saga… LIMBO, Killing Floor, Brutal Legend, inova chikuva-kurova-em-up inotonhorera uye zvakanaka zvemukati, iyo GRID Autosport, Tsvina rally uye yakasviba showdown, inotyisa mitambo uye nemamwe emhando yepamusoro magiraidhi uye Gameplay ... Fahrenheit, iyo indigo Propecy, inova yakanaka kwazvo mutambo ... Deadfall adventures uye Chivalry Medieval Hondo uye kuwedzera kwayo kwakaipisisa MaWarriors ... Bound rekare neFlame, Mutorwa: Kuzviparadzanisa, izvo hazvina kunaka, asi pakutanga zvakanakisa kudzamara Imwe Nyika yapunzika hahahaha, unova mutambo wengano unodzokororwa, iyo Borderlans Saga iwe watozvitaura, asi izvo zveBioshock? Kusingaperi ndeimwe yemitambo yakanakisa yeLinux !!! Ikozve kune iyo Dead Island saga neayo Dead Island, Dead Island yakasarudzika edition (inova imwe chete asi nekuvandudza) uye iyo Dead Island Riptide yakasarudzika edition, inova mikuru Zombie mitambo.
Uye imwe yeanondifarira, Bhuku reNgano Dzisina Kunyorwa :-) Imwe yeakanakisa graphical adventures paLinux.
Mufaro kusvikira mumwe! Ndiri kuzova neipi :-)
John Espinola akadaro
Zvese zvakanaka kwazvo asi ini ndinosuwa Dota 2
Pindura Juan Espinola
Zvese zvakanaka kwazvo, zvese zvakanaka kwazvo, asi kwete skrini, che? Ini hapana chandinoziva nezvemitambo uye ini ndakapinda kuti ndione chinhu chekutora nekutamba izvozvi, Rio de Janeiro ichinaya, dutu kumba .. Zvakanaka, zvinoita sekunge ndichafanirwa kuverenga tsananguro uye kutsvaga maererano neizvozvo .. Kwaziso
Ndinoisa sei chero ipi yemitambo iyoyo ????
Iwe unofanirwa kuve uine iyo Steam mutengi kuisirwa. Tsvaga huni munzvimbo yako yekuparadzira software. Kana iwe usiri kuiwana, tiudze iwe kugovera kwaunoshandisa